အကြင်နာနန်းတော်: Links To use if you want something 1
အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ Forward Mail က ရတာပါ။ တချို့ကိုတော့ လင်း စမ်းသုံးကြည့်ဖူးပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့ မသုံးဖူးပါဘူး။အကယ်၍များ အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့....
နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်....
ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်...
ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်.
ကိုယ့်နာမည်လေးတွေနဲ့ Logo/Icon လေးလုပ်ချင်ရင်
Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်..
သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်...
မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်...
မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ...
Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ..
ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်..
Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့...
GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်.... ...
ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်....
Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁)
Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂)
Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃)
Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်....
Memory ကိုစစ်ဖို့ software......
ချစ်သူအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ ယူရန်
Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........
Virus ကိုရှင်းတဲ့ software.....
Screen ဖမ်းတဲ့ Software...
Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ...
Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software..
Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software....
Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software......
Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software...
Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်...
ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်...
မြန်မာ E-books တွေ....
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်...
Google reader တဲ့ဟေ့...
AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ....
Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ...
Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ..
မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့...
Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)...
Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂)
Download Management လုပ်တဲ့ Software..
DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..(1)
ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
DVD ဖြတ်တဲ့ Software...
MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ...
WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software..
Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software...
DVD ကူးတဲ့ Software တွေ..
Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software...
Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software...
Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software...
ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software...
Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software..
PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ...
Partition ချတဲ့ Software....(၃)...
ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software...(၁)
ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software...(၂)
CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software....
Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software......
English - Myanmar အဘိဓာန် Software... (ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်....
English - Myanmar ဖောင့်များ.....
MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်...
ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software...
Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software....
Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software...
Icon လုပ်တဲ့ Software...
ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software.....
Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software...
File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software...
Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software...
Performance ကိုစစ်တဲ့ Software....
PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software...
Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software....
Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software...
UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software...
Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software...
Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁)...
ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့...(၂)
Active SMART Software လိုချင်ရင်.....
Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁)
Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂) ...
USB drives တွေအတွက် Password ပေးတဲ့ software..
malware တွေကို သတ်တဲ့ Software...
Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့...
Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်....